Mpivarotra amoron-dalana Mahazo mivarotra indray fa maka sisiny tsara fotsiny
Tsikaritra tato anatin’ny andro vitsy izay fa niha nitombo isa indray ny mpivarotra amoron-dalana teto Antananarivo Renivohitra raha toa ka nisy fotoana efa nadio ny sisin-dalana.
Nahitana io fiverenana io ny enyAnosy, Anosibe, Analakely, Behoririka. Nisy ny fifampiresahan’ny kaominina sy ireo mpivarotra, hoy Atoa Randrianarisoa Rija talen’ny tsena ka nifanarahana fa hiala anaty arabe fa kosa haka sisiny ireo mpivarotra amoron-dalana mba tsy hanelingelina ny fifamoivoizana. Misy kosa anefa, hoy ny fanazavany ireo toerana tena tsy misy famindram-po fa tsy mintsy miala ny mpivarotra amoron-dalana. Nitaraina moa, araka ny filazany, ireo mpivarotra ka izay no nahatonga ny kaominina tsy tonga dia nanaisotra avy hatrany azy ireo fa nandefitra. Saingy raha ny hita aloha dia mbola miteraka fanelingelenana ho an’ny mpandeha an-tongotra sy ny fifamoivoizana ihany io fandaminana io izay tsy vaovao fa efa nampiharin’ny mpitantana ny kaominina teo aloha ihany koa ary niteraka sahoan-dresaka be aza tamin’ílay fametrahana ny “ligne jaune” teny Analakely. Hita izao omaly teny Analakely, Behoririka sy Anosibe fa tena nihabetsaka indray ireo mpivarotra amoron-dalana. Ny eny Anosy moa dia lasa tsena vaovao hafa mihitsy indray. Nilaza ny lehiben’ny tsena fa hatsangana ato ho ato ny polisin’ny tsena hanara-maso ny tsena, mijery ireo mpivarotra midina anaty arabe sy mandrindra ny fifamoivoizana. Mbola lavitr’ezaka ny fandaminana ny tsena sy ny mpivarotra eto an-drenivohitra.